မင်းသန့်ခိုင် || ဌေးဝင်း || | The Ladies
Home » မင်းသန့်ခိုင် || ဌေးဝင်း ||
မင်းသန့်ခိုင် || ဌေးဝင်း ||
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ပင်ဆီဗေးနီးယား ပြည်နယ်က မူလတန်းကျောင်းသားလေး တယောက် ကျောက်ပိတ်ရက်မှာ ဘောလုံးသင်တန်း တက်နေတဲ့ ပုံလေးတွေက တကယ့်ကို အားမာန်ပါပါ ရှိလှပါတယ်။ သူ့မိခင်ရော ဖခင်ကပါ သားရဲ့ ဘောလုံးလေ့ကျင့်ရေးကွင်းကို လိုက်ပါ အားပေးနေကြတယ်။ ဒီပုံတွေကို ကြည့်ပြီး နယူးဇီလန်မှာနေတဲ့ ကဗျာဆရာ ကိုခင်လွန်းက အခုလို ကွန်မင့်ပေးထားလေရဲ့။
“ဟား ရှားပါး မင်းသန့်ခိုင်က တကယ် စတိုင်လ်ကျတယ်ဗျာ.. အဲဒီလောက် လှမ်းမြင်တာနဲ့ အကဲဖမ်းမိပြီ။ ၀မ်းသာလိုက်တာ။ မကြာမီ (ရခိုင်သား) မြန်မာပြည် မက်ဆီလာတော့မည်” တဲ့။
အဲဒီကလေးလေးဟာ ကိုစောနောင်ရဲ့ ညီငယ်ပမာ ချစ်ခင်ရတဲ့ ကိုလှရွှေနဲ့ သူ့တပည့်မ မစံကျော့ခိုင်တို့ရဲ့ တဦးတည်းသော သားပါ။ သူတို့မိသားစု ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မှာနေခဲ့တုန်းကတော့ သူဟာ မဲဆောက်ရောက်တိုင်း မင်းသန့်ခိုင်လေးကို ချီပိုးရင်း ဆော့နေကျ။ ဒီကောင်က ဆော့တာတော့ အတော်ဆော့တဲ့ကောင်။ အငြိမ်ကိုမနေတာ။
သူ့အဖေနဲ့ လိုင်းပေါ်မှာတွေ့တိုင်း သူဟာ အဲဒီကလေးအကြောင်းကို အမြဲတမ်းမေးတတ်တယ်။ တနေ့မှာတော့ သူ့အဖေပြောပြတဲ့ မင်းသန့်ခိုင်ရဲ့ စကားတခွန်းက သူ့ကို အံ့သြသွားစေတယ်။ ဒီစကားလုံးမျိုးက သူ့ဘ၀ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ စိမ်းတဲ့စကားလုံး။ စိမ်းဆို ဒီစကားမျိုးကို မိဘကို ဆရာသမားကို ပြောရင် ငရဲကြီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ တသက်လုံး ကျင်လည်လာခဲ့တာ မဟုတ်လား။ သူ့အဖေ ကိုလှရွှေ ပြောပြတာက -
“ဂိုးကြီး.. ကျွန်တော့်သားကို ကျွန်တော်က ဘယ်စာအုပ်ဖတ်၊ ဘယ်စာအုပ်မဖတ်နဲ့ ဘာလုပ်ဘာမလုပ်နဲ့ လို့ပြောရင် သူက ဘာပြန်ပြောလဲ သိလား”
“မသိဘူးလေ.. ငါ့ညီ။ မင်းသားလေးက ဘာပြန်ပြောလဲ”
“သားက ပြန်ပြောတက.. It is not fair တဲ့။ တရားမျှတမှု မရှိဘူးတဲ့.. ဂိုးကြီး”
ဒီစကားလုံးလေးတလုံးက သူတို့သားအဖကြားမှာ ဘာမှ မထူးခြားပေမယ့် မြန်မာပြည်က မိသားစု တစုအတွင်းမှာသာဆိုရင် ဒီကလေးဟာ ဘာယ်လောက်တောင် ကျောပြင်ကို ဗျောတင်ခံလိုက်ရမလဲ မသိဘူး။ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်တောနေ မိသားစုထဲမှာ ဆိုရင် သေဖို့သာပြင်။
ဘာကြောင့်ဆို ကိုယ်တွေတိုင်းပြည်မှာက ကလေးက လူကြီး ပြန်ပြောရင် မကြိုက်တတ်ကြဘူး မဟုတ်လား။ ပြီးတော့.. အားမနာရာလည်း ရောက်တယ်လို့ သတ်မှတ်ကြတယ် ဟုတ်လား။ ဒီထက်ပိုကဲပြီး အုပ်ချုပ်သူ အသိုင်းအ၀ိုင်းကိုသာ ပြောလိုက်ကြည့်ပါလား။ ဒါဟာ ချက်ချင်း နိုင်ငံရေးစကား ဖြစ်သွားပြီး အနည်းဆုံး ခုနစ်နှစ်လောက် လူ့ဘုံလောကနဲ့ အဆက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်။ အရှင်လတ်လတ် ငရဲစခန်းဖြစ်တဲ့ ထောင်နန်းမှာ ခံပေရော့။ သူက ကိုယ်တိုင် ခံဖူးထားဖူး သူဆိုတော့ သိတယ်လေ။
ဒါပေမဲ့ အခုခေတ်မှာတော့ ဒီလိုဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဲ..တခုတော့ ရှိတယ်။ ထောင်တန်းမကျနိုင်တော့ပေမယ့် အမြင်မတူသူ တွေရဲ့ အမုန်းပွားခြင်း အာဃာတထားခြင်ကို ကျိန်းသေခံရမှာ မလွဲပါဘူး။
“ဂိုးကြီး” ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ဒေသက “အကိုကြီး” လို့ ခေါ်တဲ့ ဝေါဟာရ ပါ။ ရခိုင်ဒေသိယ စကားတလုံးပေါ့။ မျိုးဆက်သစ်တွေ သုံးနေကြတဲ့ “ကွီး” ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ အတူတူပါ။
မင်းသန့်ခိုင်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် အုန်းဖန် ဆေးရုံမှာမွေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက သူ့မိဘတွေက နို့ဘိုး ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ နေတုန်း။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က အမေရိကကို ရောက်သွားကြတာ။ မင်းသန့်ခိုင် နှစ်နှစ်သား အရွယ်ကပေါ့။ သူတို့မိသားစု ရောက်ရောက်ချင်း ဒီပင်ဆီဗေးနီးယား ပြည်နယ်ကို ရောက်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ အခြားတမြို့မှာ နေခဲ့ သေးတယ်။ ဒါကို မင်းသန့်ခိုင်ရဲ့အဖေက -
“ကျွန်တော် လေ့လာသင့်တာကို လေ့လာတယ်။ အဓိကက ပညာရေး။ ကျောင်းတွေ အကြောင်း..။ ဒီနိုင်ငံမှာက ကျောင်းတွေ အားလုံးကို စုံစမ်းလို့ရတယ်။ ဘယ်ကျောင်းက ကောင်းလဲ၊ ဘယ်ကျောင်းက မကောင်းလဲ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒီကျောင်း မှာက ရန်ပုံငွေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ ဆရာတွေကို ဘယ်လိုခန့်ထားလဲ။ လစာ ဘယ်လိုပေးသလဲ သိလို့ရတယ်။ အဲဒီအ ချက်အလက် အားလုံးကို ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ရှိတယ်။ ၀င်ကြည့်လို့ ရတယ်လေ။ ဒီနေရာမှာ တခု သတိထားမိတာ ကျောင်းမ ကောင်းတဲ့အရပ်မှာ အိမ်လခတွေ အများကြီး သက်သာတယ်..ဂိုးကြီး။ အရင် ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ အရပ်မှာဆိုရင် အိမ်လခ တလကိုမှ လေးရာပေးရတယ်။ ကျောင်းက လုံးဝမကောင်း။ အဲဒီနေရာမှာ မြန်မာတွေ အများကြီး နေကြတယ်။ သုံးရာလောက် ရှိမယ်ထင်တယ်”
ကိုလှရွှေ ပြောပြတာကို နားထောင်ရင်း သူ အံ့သြနေတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ ကွာလှချည်လားပေါ့။ အင်းလေ.. ကွာမှာ ပေါ့။ ဒါက အမေရိကကိုး။ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း နိုင်ငံကြီးကိုးလို့ သူ့ဘာသာ ဖြေတွေး တွေးနေတယ်။ ကိုလှရွှေက ဆက်ပြီး -
“ကျွန်တော်က ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ထဲမှာ လိုက်ရှာတော့ ဒီနေရာမှာ ကျောင်းကောင်းရှိတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီနေရာနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က သိပ်မဝေးဘူး။ ကားနဲ့ တနာရီလောက် မောင်းသွားရင် ရတယ်။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားလည်း တယောက်မှ မရှိသလို.. အာရှတိုက်သားလည်း တယောက်မှမရှိဘူး။ အားလုံး အဖြူတွေချည်းပဲ။ ဒီနေရာက ပင်ဆီဗေးနီးယားမှာ နံပါတ်တစ်လောက် ရှိတယ်။ အိမ်လခကလည်း တထောင့်တရာလောက် ပေးရတယ်။ အရင်နေရာနဲ့ ခုနစ်ရာလောက် ကွာတယ်”
မင်းသန့်ခိုင်အဖေတယောက် သူ့သားရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ကျောင်းကောင်းကန်ကောင်း ထားနိုင်ဖို့ အားတက်သရော ဖြစ်နေချိန် ကိုလှရွှေငယ်စဉ်ဘ၀က သူ့ဇာတိ အ၀ပြင်ရွာထက် ပိုကြီးတဲ့ စနဲတို့ ကျောက်ဖြူတို့ကို ကျောင်းတက်ဖို့ သွားရာမှာ ဖိနပ်တောင် စီးဖို့တောင် ခက်ခဲခဲ့တဲ့အကြောင်း သူကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တဲ့ “ဖိနပ်ပံပြင်” အက်ဆေးကို သတိရရင်း ပြုံးမိသေးတယ်။
ဒါတွေဟာ သားသမီးတို့ရဲ့အနာဂတ်ပုံရိပ် လှလှလေးတွေအတွက် မရိုးနိုင်တဲ့ မိဘတို့ရဲ့မေတ္တာပဲ မဟုတ်လား။ ကိုယ် တိုင်တုန်းက ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ သားသမီးအလှည့်မှာတော့ ငါ့လို မဖြစ်စေရဘူးဆိုတာ ဓမ္မတာပါ။ မင်းသန့်ခိုင်တို့ရဲ့အမေရိကန်ပညာရေး စနစ်က ကိုယ်တွေနဲ့ လားလားမှမဆိုင်လောက်အောင် ကွာခြားနေတာကို သူ့အဖေက ခုလိုဆိုပြန်ပါတယ်။
“ဒီမှာက အစိုးရဆီက ထောက်ပံ့တဲ့အပြင် သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်အတွင်းမှာနေတဲ့ ပြည်သူတွေ၊ ကုမ္ပဏီ အကုန်လုံးက ကျောင်းအတွက် ပိုက်ဆံပေးကြရတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ ကျောင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေတွေ ရှိတယ်။ အခု ကျွန်တော်နေတဲ့ မြို့က ကုမ္ပဏီတွေ ရုံးတွေ စတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအားလုံးက ဒီစာသင်ကျောင်းတွေအတွက် အခွန်ပေးရတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ပေးရတယ်။ ပြောရရင် ကုမ္ပဏီတွေ အများကြီး ရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ကျောင်းကောင်းကောင်းတွေ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ လူတွေနေတဲ့အရပ်မှာ ကျောင်း ကောင်းတယ်။ ဆိုပါစို့ ကျွန်တော်က တနှစ်မှာ ဒေါ်လာ တသိန်းဝင်တယ်ဆိုရင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်ရတယ်.. ထား။ တနှစ်ကို အဲဒီကျောင်းအတွက် ဒေါ်လာ တသောင်းခွဲ ဆောင်ရတဲ့ သဘောပေါ့။ ပိုက်ဆံရှိတော့ ကျောင်းဆရာ ကောင်းကောင်းကို ခန့်နိုင်တာပေါ့”
“ကျောင်းကောင်းဆိုတာတော့ ငါ့ညီပြောလို့ သိရပါပြီ။ သင်ပုံ သင်နည်းလေးလည်း သိသလောက် ပြောပြပါဦး..ကွာ”
“ကျွန်တော့်သားဆိုရင် အခု ငါးနှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ကျောင်းတက်ပြီး တပတ်အကြာမှာ ဆရာမနဲ့ လေ့လာရေးခရီး ထွက် ရတယ်။ ဘယ်ကိုသွားကြလဲဆိုရင် လယ်လုပ်တဲ့ နေရာကို သွားကြတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ကို ကမ္ဘာလောကကြီး အကြောင်း ကို စတင် သင်ပေးဖို့ မိတ်ဆက်တဲ့ သဘောပေါ့။ ဒီကလေးလေးကို ဆရာမက ဘာခိုင်းသလဲဆိုရင် မင်းအိမ်နားမှာ ရှိတဲ့အ ပင်ဆယ်မျိုးလောက်ရဲ့ နာမည်ကို ရေးလာခဲ့ဆိုတာမျိုး စလုပ်တယ်။ ဒီအခါမှာ ကလေးက အဲဒီ အပင်ဆယ်မျိုးကို သိအောင် လုပ်ရတယ်။ မလုပ်လို့ မရဘူး။ သိအောင်လုပ်ပြီး နောက်နေ့ သူ့ဆရာမကို ပြန်ပြရတယ်။ နောက်တခုက ပုံဝတ္ထု ဖတ်ရ တယ်။ စာအုပ်ဖတ်ခိုင်းတယ်။ နောက်အပတ် မင်း ပုံပြောရမယ်။ အလှည့်ကျပေါ့။ ဘာကို ပြောပြော ပြောဖို့ အဓိက။ သူ ဖတ်ချင်ရာ ဖတ်လာခဲ့။ အာကာသအကြောင်းလား။ လူအကြောင်းလား ။ တိရစ္ဆာန် အကြောင်းလား ပြောချင်ရာပြောရတယ်”
“မိုက်နေရော.. နော်။ သူတို့က သိတာကို ပြန်ပြော။ ငါတောင် မင်းသားနဲ့ လိုက်ပြီး ကျောင်းတက်ချင်စိတ် ပေါက်လာပြီ။ တကယ်ဘဲ။ မင်းတို့ ငါတို့မှာတော့ ကလေးဘ၀ကနေ ဘွဲ့ရ ဘွဲ့လွန်ထိ ကျက်လိုက်ရတဲ့စာ.. နားလည်လည် မလည်လည်။ နောက် အလုပ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲထိ ကျက်..ကျက်နဲ့ ပြီးကို မပြီးနိုင်ခဲ့ဘူး”
“ပြီးတော့ ရှိသေးတယ် ဂိုးကြီး။ တလအတွင်းသင်မယ့်စာ၊ တပတ်အတွင်း လုပ်ထားရမယ့်စာတွေကို သူတို့က မိဘတွေဆီကို အရင်ပို့တယ်။ ဒီမှာက ကျောင်းသားက စာမဖတ်လို့ မရဘူး။ နောက်တခုက ကျွန်တော်တို့ မိဘတွေက သူတို့ကျောင်းထဲကို ၀င်လို့မရဘူး။ ဘယ်သူမှ ပေးမ၀င်ဘူး။ တားမြစ်ထားတယ်။ ဆရာ ဆရာမနဲ့ ကျောင်းသားတွေပဲ ၀င်ခွင့်ရှိတယ်။ သူတို့ ရေးထားတဲ့ စာတွေ ပို့ထားတဲ့စာတွေကို ကြည့်ပြီးမှ မိဘတွေက လေ့လာရတယ်။ ဒီမှာက စာကျက်တာထက် Activities လို့ခေါ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုလုပ်တယ်”
“ဒီလိုဆိုရင် ကလေးတွေက အမြဲတမ်း လန်းဆန်း တက်ကြွနေမှာပေါ့.. နော်။ ငါတို့ဆီမှာတော့ ကျောင်းသားတွေ ခမျာ ပခုံးများ ပြုတ်ကျမလားထင်ရတယ်။ ထည့်လွယ်ထားရတဲ့ စာအုပ်တွေလေ. ပြီးတော့ စာမရမှာ ဆရာ ဆရာမ လူကြီး မိဘတွေ ဆူမှာ ပူမှာကို အမြဲတမ်း စိုးရိမ် ထိတ်လန့်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေ ကျောင်းသား အများစုဆီမှာ ရှိနေတာက အစဉ်အလာလို ဖြစ်နေပြီ”
“ထပ်ပြီး အံ့သြစရာ ကောင်းတာ ပြောပြဦးမယ်။ ကျွန်တော့်သားဆိုရင် မာတင် လူသာကင်း ဂျူနီယာအကြောင်းကို အတန်း ထဲမှာ ပြောလာတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တောင် မသိ။ မာတင်လူသာကင်း ဂျူနီယာကို မင်းဘယ်လိုသိသလဲဆိုတော့ သူက သိတယ်တဲ့။ မာတင်လူသာကင်းဟာ လူတွေကို သနားကြင်နာတတ်တဲ့ အကြောင်း သူသိတယ်လို့ ပြန်ပြောပြတယ်။ ဒီမှာ က ကလေးတွေ ဖတ်ဖို့လည်း သေသေချာချာ ရေးထားတာ ရှိတယ်။ ကလေးတွေ ဖတ်ဖို့ ရေးထားတဲ့ မာတင်လူသာ ကင်း စာက ၀ါကျဆယ်ကြောင်းလောက်ပဲရှိတာ။ အဓိကကတော့ ကလေးတွေကို စာဖတ်ဖို့ အလေ့အကျင့်လုပ်ပေးတဲ့ သဘောပေါ့”
“သြော်.. အားကျဖို့ ကောင်းလိုက်တဲ့ ပညာရေး စံနစ်နော်”
“နောက်တခုက ကျောင်းသား အားလုံးက စာကြည့်တိုက်ကို မသွားလို့ မရဘူး။ စာကြည့်တိုက်ကို သွားဖို့အတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဆွဲကတည်းက ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်ကို သွားကို သွားရမယ်။ ငါးနှစ်သာ ရှိတဲ့ ကျွန်တော့်သားလေးက စာ ကြည့်တိုက်မှာ စာအုပ် ငှားဖတ်တတ်နေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ တက္ကသိုလ် တက်တုန်းက ဘွဲ့သာရသွားတယ်။ စာကြည့်တိုက်ကို တခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့သူ တပုံကြီး”
“ဟေ.. ဟုတ်လား။ ၀မ်းသာစရာ ကောင်းလိုက်တာ နော်။ ငါတို့ ဒီအရွယ်တုန်းကဆို ကျောက်သင်ပုန်းနဲ့ ကျောက်တံ လောက်ပဲ ကိုင်ခဲ့ဖူးတာ။ မင်းသားလေးက ကံကောင်းပါတယ်လေ”
“ဆက်ပြောဦးမယ်။ ကျွန်တော့်သားက သူဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကို ရှာတတ်နေပြီ။ ကျောင်းက ဘယ်စာအုပ်ကို ဖတ်လို့ မ ပြောပါဘူး။ ဖတ်ချင်ရာကိုဖတ်ပဲ။ တပတ်ကို ငါးအုပ် ဖတ်ရင် ရပြီ။ သားက ငါးမန်းအကြောင်း အာကာသအကြောင်းကို တော်တော် စိတ်ဝင်စားတယ်။ အာကာသကို စိတ်ဝင်စားလို့ နက္ခတ်ကြည့် မှန်ပြောင်းကို ဒေါ်လာ သုံးရာနဲ့ မှာထားတယ်။ သူ နက္ခတ်တွေ ကြည့်ရအောင်လို့ ပေါ့။ ကျွန်တော့သားက မစ်ကီဝေး ကြယ်တွေ ဘာတွေ တောင် သိနေပြီ။ ကျွန်တော် တောင် မသိဘူး။ ဒီက ကလေးတွေက တခုမဟုတ် တခု စိတ်ဝင်တစား လုပ်နေတတ်ကြတယ်.. ဂိုးကြီး”
“သြော်.. ကောင်းလိုက်တာ ငါ့ညီရာ.. မင်းသားလေးရဲ့ အနာဂတ်အတွက်ကတော့ ၀င်းလက် တောက်ပနေတာပဲ။ ဒါနဲ့ ကြုံတုန်း ငါတခု မေးပါရစေဦး။ မင်းရဲ့သားက စာဘယ်လိုဖတ်သလဲ”
“ဒီကကလေးတွေဟာ စာနှစ်မျိုး ဖတ်ရတယ် ဂိုးကြီး။ bed time reading ဆိုတဲ့ အိပ်ခါနီး ဖတ်ရတဲ့ စာနဲ့ Essential reading မဖတ်မဖြစ် ဖတ်ရမယ့်စာ ဆိုပြီး ရှိတယ်။ တလကို ငါးအုပ်ဖြင့် ငါးအုပ်ဖတ်ရမယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ နားလည်အောင် ဖတ်။ ပြီးရင် ကျောင်းမှာ presentation ပြန်လုပ်.. အဲဒီဟာ သူတို့ရဲ့ စာဖတ်နည်းပဲ”
ပညာဆိုတာ လူတယောက်အတွက် အရေးအပါဆုံး အရာလို့ ကိုစောနောင် တသက်လုံး စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည်ခဲ့သော်ငြား မင်းသန့်ခိုင်အကြောင်း သူ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ ပြောဆိုမိတဲ့နောက်မှာတော့ ကိုယ်ဟာ တကယ်ပညာစစ်ကို သင်ခွင့်မရခဲ့ပါလား ဆိုတာ ငလျင် ရုတ်တရက် လှုပ်လိုက်လို့ အထိတ်တလန့် ခံစားရသူပမာ ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။
ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ ကမ္ဘာကို ဦးဆောင်နေတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာက ငါးနှစ်သားကလေးတောင် စာကြည့်တိုက်ကို ကိုယ့်ဘာသာ သွားတတ်တယ်၊ ကိုယ်သိတာ နားလည်တာကို ပြန်ပြီး ချက်ကျလက်ကျ ပြောဆိုတတ်တယ်လို့ တဆင့်စကား ကြားလိုက်ရချိန်မှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာတော့ ဆရာသင်တဲ့ အပုဒ်မပါလို့ ဆယ်တန်းကျရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဒုနဲ့ဒေး ရှိနေဆဲ။ ဘွဲ့ဒီဂရီတွေ အစီအရီရထားပေမယ့် ကိုယ်သိတာ နားလည်တာ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို လူရှေ့ သူရှေ့ မပြောဝံ့မဆိုဝံ့သူ မြောက်မြားစွာ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ အရှိတရားက ရင်လေးစရာ ကောင်းလိုက်ပါဘိတောင်း။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ.. ပြည်သူတွေ ဒီမိုကရေစီ ရဖို့ တိုက်ခဲ့ တောင်းခဲ့တာဟာ လက်ညိုးထောင် ခေါင်းညိတ် လက်သင့်ရာ စားတော်ခေါ် မှားသည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဖြစ်စေ ငါ့လူဘက်က မျက်စိ စုံမှိတ်ပြီး ရပ်တည်တတ်တဲ့ လူတွေ ဆိတ်သုဉ်းဖို့ ပဲမဟုတ်လား။ မင်းသန့်ခိုင်လေး သင်ယူနေတဲ့ ပညာရေးစနစ်မျိုး ထွန်းကားလာစေချင်လို့ အသက်တွေ ဘ၀တွေကို ပေးဆပ် စတေးခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား။ လက်သန်းထိပ်ဖျားမှာ မင်ပြာတွေစွန်းပြီး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား။